Dab geystay khasaaro oo ka kacay goobo Ganacsi oo ku yaalla Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dab geystay khasaaro oo ka kacay goobo Ganacsi oo ku yaalla Muqdisho
Dab geystay khasaaro oo ka kacay goobo Ganacsi oo ku yaalla Muqdisho
Dab xoog leh ayaa dhowr daqiiqo kahor ka kacay kaalin lagu iibiyo Shidaalka oo ku taalla Isgoyska Black Sea ee demada Hodan ee Gobolkaan Banaadir, waxaana laga helayaa faah faahino dheeraad oo kasoo baxaya.
Dad Goobjoogayaal ah oo la hadlay Idaacadda Dalsan ayaa u sheegay in dabka ka kacay kaalinta shidaal uu kusii faafay goobo Ganacsi oo ku dheganaa Xarunta, isla markaana uu ahaa mid xoogan dabkaas oo muddo socday.
Gaadiidka dab demiska Maamulka Gobolka Banaadir iyo kuwo ay leeyihiin Shirkaddo ayaa gaaray goobta oo sameeyay dadaalo kala duwan, iyagoona markii dambe ku guuleystay deminta dabkii kacay oo aan weli la ogeyn sababta dhalisay.
Khasaaro hantiyadeed oo farabadan ayaa lagu warramayaa inuu geystay dabkaas ka kacay kaalinta Shidaal, kuna sii faafay goobo kale oo Ganacsi, isla markaana waxaa halkaas ku baaba’ay agayo iyo hanti kale, mana jiro khasaaro nafeed oo ka dhashay.
Xaafaddo ka tirsan degmooyin qarkood ee Gobolka Banaadir ayaa laga arkayay uuro madow oo cirka isku shareertay oo ka baxeysa kaalinta shidaalka ee uu dabka qabsaday, welina ma jiro tirro kooban sax ah oo ku aadan hantida gubatay.
Maqaal horeQatar oo War kasoo saartay Qaraxii Al-shabaab ee ka dhacay Xerada Ciidanka
Maqaal XigaWafdi ka socday Dowladda oo gaaray Magaalada Baydhabo